March 19, 2016 February 24, 2018 Admin Admin 1505 Views0Comments islam, LGBT Rights	min read
မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေအနက် လိင်တူချင်း ချစ်ခင်စုံမက်တာကို ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်အရေးမယူတဲ့ နိုင်ငံ ငါးနိုင်ငံအကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြပါမယ်။ အဆိုပါ နိုင်ငံငါးနိုင်ငံစလုံးဟာ ဗြိတိသျှအင်ပါယာရဲ့ ကိုလိုနီလုပ် ကျွန်ပြုမှုကို မခံရတာဟာလည်း ထူးခြားတဲ့ ဘုံတူညီချက်အနေနဲ့ ရှိနေပါတယ်။
မွတ်ဆလင်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ် သို့မဟုတ် တခြား ဘာနိုင်ငံပါလို့ပဲ တံဆိပ်ကပ်ထားကပ်ထား ကမ္ဘာ့တောင်ဘက်ပိုင်းက နိုင်ငံအတော်များများဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် ကိုလိုနီခေတ်က ဥပဒေတွေကို အသုံးပြုပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူနှစ်ဦးကြားက လိင်တူချင်း ချစ်ခင်စုံမက်မှုကို ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ လိင်တူချင်း ချစ်ခင်စုံမက်မှုကို ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်အရေးယူတာဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် မူလလက်ဟောင်း ဥပဒေတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။
ဒါကြောင့် မွတ်ဆလင်နိုင်ငံများနဲ့ LGBT အခွင့်အရေးအကြောင်းကို ပြောကြဆိုကြတဲ့အခါ အခု ရေးသား ဖော်ပြမယ့် ဒီနိုင်ငံတွေဟာ တချို့သူတွေ တွေးထင်ထားသလိုမျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို နမူနာပြ သိရှိနေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဖော်ပြမယ့် နိုင်ငံတွေကတော့ အနောက်အာဖရိက၊ အရှေ့တောင်အာရှဒေသ၊ ဥရောပအလယ်ပိုင်းနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသက နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံမှာ ဂေးတွေအနေနဲ့ ဒေသခံတွေရဲ့ ရွံရှာမုန်းတီးမှုကို ခံရကောင်းခံရနိုင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ဥပဒေကတော့ သူတို့တွေရဲ့ဘက်မှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်က ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းရေးတပ်မှာ စေတနာလုပ်အားပေးခဲ့တဲ့ မာလီနိုင်ငံသူတစ်ယောက်ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ မာလီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဌာန်းထားတဲ့ ပုဒ်မ ၁၇၉ ဟာ တကယ်တော့ လိင်တူလိင်ကွဲဆိုပြီး အထူးသီးသန့် ခွဲခြားထားတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အများပြည်သူမြင်ကွင်းမှာ မဖွယ်မရာ ပြုမူမှုကိုသာ တားမြစ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိတိကျကျ ပြောရရင် အာဖရိကမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၃၈ နိုင်ငံဟာ လိင်တူချင်း ချစ်ခင်စုံမက်မှုကို ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး တစ်ချို့နိုင်ငံတွေဟာ သေဒဏ်အထိ အပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ပြဌာန်းထားပါတယ်။
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသက နိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အတော်အတန် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ အမြင်သဘောထား ရှိကြပြီး သည်းခံနိုင်မှုပမာဏလည်း မြင့်မားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အလျောက် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့၊ ကျင့်ဝတ်တွေဟာ LGBT တွေကို လူကြားထဲ ထွက်မလာရဲအောင် ဖိအားကြီးတွေ ဖြစ်နေစေတယ် ဆိုပေမဲ့ ဒီအခြေအနေကြားထဲကပဲ ကိုယ် ဘယ်သူလဲဆိုတာကို ဖော်ပြရင်း လူမြင်ကွင်းထဲကို ထွက်ပေါ်လာတဲ့သူတွေ လည်း ရှိပါတယ်လို့ ဂျော်ဒန်အခြေစိုက် ဂေး မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ရဲ့ အယ်ဒီတာဖြစ်သူ My.Kali က ပြောပါတယ်။
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံဟာ လိင်တူချင်း ချစ်ခင်စုံမက်မှုကို ဥပဒေအရ လက်ခံထားပြီး အတော်အတန် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းမှု အမြင်သဘောထားရှိတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ လူမြင်ကွင်းမှာ လူတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် ပြုလုပ်နေတဲ့ LGBT တွေကိုတော့ အများပြည်သူတွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တကို ပျက်ပြားအောင် လုပ်ဆောင်စေမှုနဲ့ တရားစွဲဆို အရေးယူနိုင်ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့မွတ်ဆလင် လူဦးရေအများဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပေမယ့် ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးကို မရောထွေးစေဘဲ သီးသန့် ခွဲခြားကျင့်သုံးနေတဲ့ စံနမူနာပြ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာ အိမ်နီချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ စင်ကာပူ (မွတ်ဆလင် နိုင်ငံမဟုတ်) နိုင်ငံနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံ (မွတ်ဆလင်နိုင်ငံ) တွေကတော့ ၎င်းတို့နိုင်ငံမှာ လိင်တူချင်း ချစ်ခင်စုံမက်မှုကို ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး ဒီနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံစလုံးဟာ တစ်ချိန်က ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီလက်အောက်မှာ နေခဲ့ဖူးကြပါတယ်။
လိင်တူချင်း ချစ်ခင်စုံမက်မှုကို အော်တိုမန် အင်ပါယာ ဘုရင်ကြီးက ၁၈၅၈ ခုနှစ်မှာ ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်ကနေ ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုက ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အခြားတိုက်ကြီး သုံးတိုက်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေကို များစွာ ရိုက်ခတ်မှု ရှိစေခဲ့ပါတယ်။ တူရကီနိုင်ငံဟာ ၁၉၂၀ ခုနှစ်မှာ အော်တိုမန် အင်ပါယာအဖြစ်ကနေ သီးသန့်နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့ လိင်တူချင်း ချစ်ခင်စုံမက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သီးခြားဥပဒေ ပြဌာန်းစရာ မလိုတော့ဘူး ဖြစ်ပါတယ်။ တူရကီမှာရှိတဲ့ LGBT အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်း လွတ်လပ်မှုအပြည့်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
LGBT တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေတွေ ပြဌာန်းတည်ရှိထားဖို့ဟာ အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် LGBT တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေတွေကိုသာ ပြဌာန်း မထားရင် Transgender ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ဟာ အမျိုးသမီးလို ဝတ်စားဆင်ယင်ပြီး ကျောင်း စာသင်ခန်းထဲဝင် စာသင်မယ် ဆိုပါစို့။ ဒီအတွက် ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်ဟာ မတွေးဝ့ံစရာ ဖြစ်ပေမယ့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေရှိနေခြင်းက ဒီအခြေအနေမျိုးတွေကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ Pink Embassy အဖွဲ့မှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေတဲ့ Kristi Pinderi က ပြောပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံတွေအားလုံးမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ LGBT တွေဟာ တခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာ နေထိုင်သူတွေလိုပဲ စိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥပဒေဟာ ၎င်းတို့ဖက်မှာ ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့အချက်က မိမိတို့ လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အသိတွေ ပေါ်ပေါက်လာနေစေပြီး တစ်နေ့မှာ LGBT တွေဟာလည်း တခြား Straight (LGBT မဟုတ်တဲ့သူတွေ) လိုပဲ ကွဲပြားမှုမရှိ အတူတူပါပဲလားဆိုတဲ့ အိပ်မက်မက်ဖို့ တွန်းအားသဖွယ် ဖြစ်နေစေပါတယ်။
← Transgender Women and Feminists: Are they Compatible?
Homosexuality: Inborn or Learnt Behavior? →